अमरदह ढल्के जोवनको उपाधी इटहरी भेट्रानलाई - Pradesh Dainik
अमरदह ढल्के जोवनको उपाधी इटहरी भेट्रानलाई
प्रदेश स्तरीय तेस्रो अमरदह ढल्के जोवन गोल्डकपको उपाधी योङ ब्रदर्श इटहरीले (इटहरी भेट्रानले) हात पारेको छ । मंगलबार भएको फाइनल खेलमा पूर्वाञ्चल भेट्रान दमकलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै इटहरीले उपाधी पोल्टामा पारेको हो ।
इटहरीका तर्फबाट पहिलो हाफको २५ औँ मिनेटमा १० नं. जर्सीका खेलाडी तिर्थ बस्नेतले गोल गरेका थिए । खेलको समयावधिभर दमकले गोल गर्न नसकेपछि तिर्थले गरेको गोल नै निर्णयक बन्यो । खेल अवधिभर निकै खटेर खेलेका दुवै टिमले थप गोल गर्न भने सकेन्न् । दोस्रो हाफमा निकै समहालिएको दमकले गरेका निकैवटा प्रहार गोलमा परिणत हुन सकेन्न ।
दुवै टिमलाई निकै राम्रा खेलाडी भएको टिम मानिएको थियो । सेमी फाइनलमा इटहरी भेट्रानले उर्लाबारीलाई ३ गोलले पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेको थिया । यस्तै पूर्वाञ्चल भेट्रान दमकले एपीएफ पकलीलाई ३ गोलले पराजित गरेर फाइनल भित्रिएको थियो ।
मोरङको सुनवर्षी २ अमरदहमा रहेको अमरदह ढल्के जोवन युवा क्लवको आयोजना भएको गोल्डकपमा विजेता इटहरीले २ लाख ११ हजार र उपविजेता दमकले १ लाख ५१ हजार ट्रफि, मेडल र प्रमाण–पत्र पाए । फाइनल खेलको मेन अफ द म्याच बिजेता टोलिका गोल रक्षक राम कुमार चौधरी घोषित हुँदै नगद ५ हजार प्राप्त गरे । यस्तै प्रतियोगिताको सर्बोउत्कृष्ट खेलाडी बिजेता टोलि इटहरीका कप्तान निर्मल तामाङ घोषित हुँदै नगद १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे। प्रतियोगितामा उच्च गोल कर्तासमेत बिजेता टोलिकै लिला थापा मगर बन्दै नगद १० हजार प्राप्त गरे भने अनुशाशित टोलि आयोजक अमरदह भेट्रानको ए टिम घोषित भएको छ। गोल्डकपको प्रथम पुरस्कारको रासी २ लाख ११ हजार प्रनिल सप्लायर्स विराटनगरले प्रयोजन गरेको हो । यस्तै दोस्रो पुरस्कार रासी १ लाख ५१ हजार माउण्ट एभरेष्ट बोडिङ स्कुल अमरदहले प्रायोजन गरेको हो ।
३० बर्ष उमेर पुगेका भेट्रान खेलाडीहरुको सहभागिता रहेको खेलमा १ नं. प्रदेशका १६ टिमले सहभागिता जनाएका थिए। खेल वैशाख २१ गते देखि वीरेन्द्र सार्वजनिक मा.विको खेल मैदानमा भएको हो । खेलको उद्घाटन सांसद तथा पूर्व सूचना तथा संचार मन्त्रि डा. मिनेन्द्र रिजालले गरेका थिए । खेलको समापन सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रि डा. शशांक कोइरालाले गरे ।
चमरु ऋषिदेवले पाए पल्सर
खेलको अर्को आकर्षणका रुपमा रहेको १५० सिसिको पल्सर सुनवर्षीका चमरु ऋषिदेवले पाएका पाए । खेलको फाइनलका अवसरमा लक्की ड्र मार्फत सो घोषणा गरिएको हो । १ हजार रुपैयाँ दरको भाग्यशाली चिठ्ठा मार्फत एक जनालाई आयोजकले मोटरसाइकल प्रदान गरेको हो। जम्मा ३ सय थान टिकट बिक्रीका लागि राखिएकोमा लक्की ड्र हुनु अगाडी सम्म जम्मा २ सय ७६ वटा टिकट विक्री भएको थियो । बाँकी रहेका ४४ वटा टिकटलाई पनि लक्की ड्र मा राखिएको थियो । भाग्यसाली विजेता बनेका ऋषिदेवलाई अध्यक्ष प्रताप तामाङले पल्सरको चाबी हस्तान्तरण गरेर बधाई दिए ।